Sina: Miadana ireo Vaovao momba ireo Fikomiana ao Urumqi · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Desambra 2018 17:28 GMT
Nanao sivana goavana tamin'ny vaovao, sary ary lahatsary mikasika ireo fikomiana ireo ny manampahefana, saingy mitete tsikelikely ny vaovao, ary olona 140 no maty novonoina.
Milaza i D'Arcy Doran ao amin'ny AFP, [amin'ny teny anglisy, toy ireo rohy rehetra anatin'ity lahatsoratra ity] (rohy maty) fa:
“Voasakana tao Sina tamin'ny Alatsinainy tolakandro ny Twitter sy ny Youtube, raha toa ka tsy nanome valiny ho an'ny “Urumqi”, ilay tanàna ao Winjiang izay nisehoan'ireo fikomiana, ireo fitaovam-pikarohana Sinoa tena fampiasa.
Nilaza ihany koa ireo mponina sasany ao Urumqi fa notapahina ny aterineto tao an-tanàna, raha toa ka nahena ny tolotra am-pinday sasany, izay nanasarotra ny fampitan'ny olona vaovao mikasika ilay korontana sy famoretana.
Tsy nitatitra afa-tsy ny dika ofisialin'ny zava-nitranga ihany koa ny haino amanjery mahazatra, izay manameloka ireo vahoaka ao amin'ny foko Uyghur silamo ho tompon'andraikitra amin'ireo korontana ireo.”
Mifanohitra amin'ireo mpanao fihetsiketsehana any Iran, izay nanana fitaovana ara-teknika hanaparitahana ireo vaovao mikasika ny hetsika nataony sy ny famoretana nataon'ny manampahefana taminy, miatrika fahatapahana teknolojika kosa ireo vahoakan'i Urumqi.
Milaza i Mark Ward, avy ao amin'ny BBC, fa lasibatr'i Shina ihany koa ireo safidy hafa ao an-toerana ankoatra ny efa ataony amin'ny YouTube, Twitter ary Facebook:
”Nanapa-kevitra ny hanakana ny fidirana amin'ny Twitter toy ny amin'ireo safidy hafa ao an-toerana toy ny Fanfou sy ny Youku ihany koa ny governemanta Sinoa.
Manangona ireo fanambarana tolotra tsy azo idirana manerana ny tany ny tranonkala Herdict, ary taorian'ilay famoretana sinoa, nandrakitra fanambarana fahatapahan'ny Twitter manakaiky ny 150 isa teo izy tao Sina.”
Ao amin'ny YouTube, misy mampiakatra ny lahatsarin'ireo fikomiana, ny ankamaroany avy amin'ny masoivohon-gazety ofisialy sinoa, fa ao ihany koa ireo lahatsary tsy ofisialin'ny Youku. Ity misy iray amin'izy ireo, avy amin'ny Youku, fikomiana ao Urumqi.